१० नि: शुल्क वर्डप्रेस ट्यूटोरियल शुरुआतीहरूको लागि आदर्श क्रिएटिव अनलाइन
मेलिसा पेरोटा | | ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, WordPress
WordPress सामग्री निर्माण प्लेटफर्म बढ्न जारी छ र अधिक र अधिक ग्राहकहरु आफ्नो साइट बनाउन यो माध्यम प्रयोग गर्न मा चासो राख्छन्। यस अर्थमा, WordPress विषयवस्तुको डिजाइन एक भएको छ डिजाइनरहरूको लागि धेरै लाभदायक गतिविधिको बजार को २ 26% को साथ।
आज यो केवल विकासकर्ताहरू र ब्लगरहरूले मात्र अनलाइन बजारमा उपस्थिति लिन चाहने जो कोहीद्वारा प्रयोग गरिएको छैन। यस कारणका लागि यो डिजाइनरहरूको लागि उत्तम उपकरण हो यो उपकरणको मास्टर गर्न।
प्रशिक्षित पेशेवरहरूको माग अत्यधिक छ, हामी तपाईंलाई यो अवसरको फाइदा लिन मद्दत गर्न चाहन्छौं; र यसैले हामीले सिक्न शुरू गर्नेहरूको लागि १० आदर्श ट्यूटोरियल संकलित गरेका छौं।
पाठ्यक्रम साइट भ्रमण गर्न वा पूरा ट्यूटोरियल हेर्न शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्।
1 शुरुआतीहरूको लागि स्क्र्याचबाट ट्यूटोरियल
27चरणमा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल
3 एचटीएमएल using को प्रयोग गरेर एक उत्तरदायी WordPress विषयवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्
4 WordPress मा वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्न पूर्ण गाईड
5 WordPress मा समस्याहरूको लागि मद्दत गर्नुहोस्
6 स्क्र्याचबाट एक WordPress विषयवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्
7 WordPress मा एक विषयवस्तु कसरी स्थापना गर्ने
8 WordPress विषयवस्तु मास्टर कोर्स
9 उत्तम टेम्पलेट छनौट गर्न कुञ्जीहरू
10 सब भन्दा साधारण शुरुवात गल्तीहरू
शुरुआतीहरूको लागि स्क्र्याचबाट ट्यूटोरियल
एक ट्यूटोरियलले चरण-चरणमा वर्णन गर्दछ कि कसरी वर्डप्रेसमा तपाईंको साइट सिर्जना गर्ने। यसले आधारभूत अवधारणाको साथ साथै प्राविधिक सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि विकसित गर्दछ। यसले प्लगइनहरू, उन्नत कन्फिगरेसनहरू र अन्य विशिष्ट अवधारणाहरूको बारेमा पनि वर्णन गर्दछ। पूरा पाठ्यक्रम लिन पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस्।
7 चरणमा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल
Este संचार विद्यार्थीहरूको लागि विशिष्ट ट्यूटोरियल यसले सुरुमा वर्डप्रेससँग सम्बन्धित अवधारणाहरूको वर्णन गर्दछ। यो WordPress को दुई संस्करणहरू भेद गरेर शुरू हुन्छ, थिम, प्रयोगकर्ता र तत्वहरूको अवधारणा विकास गर्दछ। पछि सात चरणमा साइट कसरी बनाउने भनेर वर्णन गर्दछ धेरै राम्रो विकसित।
एचटीएमएल using को प्रयोग गरेर एक उत्तरदायी WordPress विषयवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्
गाइड जसले HTML5 प्रयोग गरेर वर्डप्रेसमा उत्तरदायी विषयवस्तु कसरी सिर्जना गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ। जोसँग पहिले नै एचटीएमएल प्रोग्रामिंगको पूर्व ज्ञान छ र WordPress लाई डिजाइनमा अनुकूलन गर्न खोज्दै छ; वा साधारण रूपमा जो धेरै अधिक विस्तार मा आफ्नो WordPress साइट सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ को लागी।
WordPress मा वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्न पूर्ण गाईड
यस मास्टर गाइडमा जेभियर ब्लाकारले विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ WordPress बाट स्क्र्याचबाट कसरी वेबसाइट सिर्जना गर्ने। ट्यूटोरियल यस वर्ष अपडेट गरिएको छ र उत्तम टेम्पलेट छनौट कसरी गर्ने को लागी कसरी विजेट कन्फिगर गर्न को लागी सुझावहरु सम्मिलित छ।
WordPress मा समस्याहरूको लागि मद्दत गर्नुहोस्
यो लेखले कसरी यो सामान्य तरीकामा काम गर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ, विशेष रूपमा प्रयोगकर्ताहरू प्राय: विशेष समस्याहरूमा केन्द्रित। यो साइटको निर्माणको क्रममा उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन आदर्श छ।
स्क्र्याचबाट एक WordPress विषयवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्
यस गाईडमा पाब्लो लोपेज वर्णन गर्दछन् कसरी शुरूबाट एक WordPress विषयवस्तु सिर्जना गर्ने। यसको लागी पहिले ध्यानमा राख्नु पर्ने विचारहरू के हो र विषय कसरी लेख्ने भनेर वर्णन गर्दछ। यसले अवधारणाको विकास पनि गर्दछ जस्तै लूप र अन / अफ कार्यहरू।
WordPress मा एक विषयवस्तु कसरी स्थापना गर्ने
यस छोटो ट्यूटोरियलमा जोसप WebsiteToolTester.com बाट हामीलाई सिकाउँछ नयाँ थिमहरू कसरी स्थापना गर्ने सजीलो र चाँडै WorPress को।
WordPress विषयवस्तु मास्टर कोर्स
यो भिडियो ट्यूटोरियल हो विस्तृत WordPress टेम्पलेट निर्माण कोर्स करीव १० मिनेटको अवधिमा १२ भिडियोमा विकसित भयो। यो एकदम पूर्ण, बुझ्न सजिलो र पूर्ण नि: शुल्क हो!
उत्तम टेम्पलेट छनौट गर्न कुञ्जीहरू
यहाँ छनौट गर्नुहुँदा तपाईले १० राम्रो सुझावहरू ध्यानमा लिन सक्नुहुनेछ तपाइँको स्वयं-होस्ट गरिएको WordPress स्थापनाको लागि नयाँ टेम्पलेट, अनुकूलन डिजाइनबाट, डिजाइन विकल्पहरू र सबै भन्दा उन्नत उपकरणहरू।
सब भन्दा साधारण शुरुवात गल्तीहरू
यस लेखको साथ Aula Media व्याख्या गर्दछ जुन सबैभन्दा सामान्य त्रुटिहरू हुन्छन् जब WordPress मा काम गर्दा हुन्छन्। यसलाई हेर्नु र यी समस्याहरूलाई पहिल्यै बेवास्ता गर्न लायक छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » WordPress » १० नि: शुल्क वर्डप्रेस ट्यूटोरियल शुरुआतीहरूको लागि उत्तम